कांग्रेसभित्र फेरि अर्को तरङ्गको संकेत,कसरी सल्टाउलान् देउवाले ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कांग्रेसभित्र फेरि अर्को तरङ्गको संकेत,कसरी सल्टाउलान् देउवाले ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोर्नुपरेको पराजयबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठिरहको बेला कांग्रेसमा नयाँ तरंग आउने संकेत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका १९ जिल्ला सभापतिहरुको बुधबार मेलम्चीमा गोप्य बैठक सुरु भएको छ ।
बैठकमा सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, मनाङ र मुस्ताङसहित १९ जिल्लाका सभापतिहरु सहभागी छन् । बैठकको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराइएको छैन । जसको संयोजन गरेका हुन्, बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सञ्जय गौतमले। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई हराएका उनी बर्दिया कांग्रेसका सभापति हुन्।
सिन्धुपाल्चोकमा केही वर्षअघि ७५ वटै जिल्ला सभापतिहरुको भेला गरिएको थियो । निर्वाचन समीक्षाको लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति शेरबहादुरलाई दबाब परिरहेको बेला भएको सभापतिहरुको भेला कांग्रेसभित्र अर्को तरङ्ग ल्याउने स्थिति देखिएको छ ।
काठमाडौं । असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउने कि कालो दिवस भन्ने विषय तराई मधेसमा यतिबेला चर्चामा छ। […]
‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर’’भन्दै शक्ति प्रदर्शन गर्ने सिके राउतको तयारी
काठमाडौं । लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा खुलेआम देश विखण्डनको अभियान चलाउँदै आएका सिके राउतले […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मता पन्तका बाबुआमा र आफन्तहरूसँग भेट्न […]
प्रचण्ड आज चीन जाँदै,भ्रमण अर्थपूर्ण
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज चीन जाँदै छन् । केही दिन भारत भ्रमण […]